हृदयाघात कसरी हुन्छ ? यस्तो छ बच्ने उपाय « Naya Page
हृदयाघात कसरी हुन्छ ? यस्तो छ बच्ने उपाय
प्रकाशित मिति : September 15, 2018
काठमाडौं: कोरोनरी आर्टरीभित्र रक्तप्रवाह अचानक बन्द भएमा हृदयाघात हुन्छ । समयमै पुनः रक्तप्रवाह नभएमा उक्त कोरोनरी आर्टरीबाट रक्तसञ्चार हुने मुटुको मांसपेशी मरेर जान्छ । यस्तो भएमा असर परेको मुटुको उक्त भागले काम गर्न छाड्छ र मुटु सधैंका लागि कमजोर हुन जान्छ ।
हृदयाघातको सुनौलो घण्टा
अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गरिने जाँचहरु
हृदयाघातको शंका भएको बिरामीलाई तुरुन्तै इमर्जेन्सीको खाटमा सुताएर इसिजी गर्नुपर्छ । अस्पताल पुगेको १० मिनेटभित्रै उपलब्ध चिकित्सक वा मुटुरोग विशेषज्ञले इसिजि हेरिसकेको हुनुपर्छ । इसिजी बाहेक सामान्य रगतको जाँच र ट्रोपोनिन भन्ने रगतको जाँच पनि गरिन्छ । यो जाँचले चिकित्सकले हृदयाघात भएको वा नभएको पुष्टि गर्न सक्छन् । हृदयाघातको निदान विशेषगरी लक्षणका आधारमा र इसिजी या ट्रोपोनिनको रिपोर्टअनुसार गरिन्छ ।
बन्द भएको कोरोनरी आर्टरीलाई खोल्नु र रक्तप्रवाहलाई पुनः सन्चालन गर्नु नै हृदयाघातको प्रमुख उपचार हो । रक्तप्रवाहलाई जति सक्दो चाँडो र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नु महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ । बन्द भएको नलीलाई दुई तरिकाले खोल्न सकिन्छ । प्रथमः औषधि र दोस्रो एन्जिओप्लास्टी । कुन बिरामीलाई औषधि र कुनलाई एन्जिओप्लास्टी उपचार गर्ने हो, यसको निर्णय उपचारमा संलग्न चिकित्सकले धेरै कुरामा विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एन्जिओप्लास्टी भन्नाले कोरोनरी आर्टरीमा तार छिराएर बेलुन र स्टेन्टको मद्दतले रक्तप्रवाह सुचारु गर्ने भन्ने बुझिन्छ । औषधिले आर्टरीमा भएको क्लटलाई पगालेर रक्त प्रवाह सुचारु गर्छ । दुवै तरिकाको आ–आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुने भएकाले उपचारमा संलग्न विशेषज्ञले नै आफ्नो बिरामीको लागि उपयुक्त तरिका छान्ने गर्छन् । तर, सुविधा भएको ठाउँमा एन्जिओप्लास्टी नै सर्वोत्तम उपचार मानिन्छ । कुनै कारणवश एन्जिओप्लास्टी गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा बिरामीलाई औषधिद्वारा नै उपचार गरिन्छ ।
उपचारका बारेमा स् चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै औषधि खानुपर्छ । आफ्नै इच्छाले मात्र कम गर्नु, बढाउनु वा खाँदैं नखानुले अर्को हृदयाघात निम्त्याउन सक्छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार इसिजी, इकोकार्डियोग्राफी र पोटासियमको जाँच समय समयमा गराइराख्नुपर्छ ।
शारीरिक गतिविधिका बारेमा स् शारीरिक गतिविधि सामान्य रुपले कति दिनमा गर्ने हो, सो कुराको जानकारी चिकित्सकसंग लिनुपर्छ । बिरामीले बिस्तारै बिस्तारै प्रतिदिन गतिविधि बढाउँदैं लैजानुपर्छ र लगभग २, ३ हप्तापछि अफिस जाने या सामान्य कार्य गर्न सक्नेहुन्छ । हेभी एक्सरसाइज गर्नुहुँदैंन । यसका बारेमा आफ्नै मुटुरोग विशेषज्ञसंग छलफल गर्नुपर्छ ।यौनक्रिया र गाडी चलाउनेबारे स् यौनक्रियामा संलग्नता र गाडी चलाउने काम ३ हप्तापछि गर्न मिल्छ । तर, यसबारे पनि डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।
खानाका बारेमा स् खानामा नुन, चिनी र चिल्लो कम गर्नुपर्छ । सागपात र फलफुल बढी खानुपर्छ । खाना खाएपछि तुरुन्तै हिड्नु हुँदैंन । खाना थोरै–थोरै बरु धेरैपटक खान मिल्छ । मुटु रोगीले दिउँसो खाना खाएपछि एकछिन भएपनि सुत्नु वा आराम गर्नु जरुरी छ ।धूमपान र मदिरा सेवनका बारेमा स् हृदयाघात भइसकेका व्यक्तिले एउटासमेत चुरोट सेवन गर्न मिल्दैन । अरुले सेवन गरेको धुवाँले पनि नराम्रो असर गर्छ ।
टिपर रोकेर चालककी श्रीमतीमाथि जब्बरजस्ती करणी र लुटपाट, तीनमध्ये एक युवक पक्राउ
घुम्न बोलाएर १५ वर्षीया किशोरीलाई गेष्ट हाउसमा लगेर बलात्कार, युवक पक्राउ
१३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले पाएनन् कोरोनाको दोस्रो डोज खोप, सर्वोच्चमा पर्‍यो रिट